Dooro xirfado | profiles Job iyo liiska shaqooyinka ka USAHello | USAHello
Raadi wax ku saabsan shaqooyinka beeraha iyo shaqooyinka kala duwan ee beeraha iyo cuntada wax soo saarka. Akhri wax dheeraad ah
Daryeel, shaqooyinka adeegga iyo dayactirka
daryeelka shakhsi ahaaneed, shaqooyinka nadiifinta iyo dayactirka yihiin faafay warshado badan oo kala duwan. Baro, kuwaas oo dhan shaqooyinka bixiya adeegyada muhiimka ah ee USA. Akhri wax dheeraad ah
Dhisidda iyo dayactirka shaqooyinka
Raadi wax ku saabsan shaqooyinka dhismaha iyo dayactirka. Baro waxa aad u baahan tahay in la sameeyo si ay u bilaabaan xirfadaada. Akhri wax dheeraad ah
Shaqooyinka waxbarashada waxay noqon kartaa mid aad u faa'iido. Baro kala duwan ee doorarka ay ka mid yihiin maktabad, macalin bedel, iyo macallinka ESL. Akhri wax dheeraad ah
adeegga cuntada waa warshadaha heer-galo wanaagsan oo cusub. Waxaad noqon kartaa server a, basaska, ama ciidankii aan tababar aad u badan. Akhri wax dheeraad ah
Healthcare waa beer si dhakhso ah u koraya. Shaqooyinka sida kalkaalisada, kaaliyaha dhakhaatiirta iyo farsamo farmashiyaha waa in baahida sare. Baro shaqooyin sare ee daryeelka caafimaadka iyo sida loo helo waxbarashada aad u baahan tahay. Akhri wax dheeraad ah
Waxaa jira shaqooyin xirfadda iyo kuwa bilaa heli karo wax soo saarka. Baro shaqooyin daawo soo saaridda, baabuur, cunto iyo dhar. Akhri wax dheeraad ah
Maamulka Public kuu ogolaanayaa inaad si aad wax ku biirisid beesha. In shaqooyin sida maamulaha kayska iyo turjumaan, asalka dhaqamada inaad ka faa'iidaysan karto. Akhri wax dheeraad ah
Sales iyo shaqooyinka tafaariiqda
Sales overlaps la warshado kale oo badan oo ka fashion daryeelka caafimaadka. Shaqooyinka Sales noqon kartaa ku meel gaar ah ama xirfad nolosha oo dhan. Akhri wax dheeraad ah
Shaqooyinka Technology waa kala duwan iyo sidoo kale-bixisay. Read ku saabsan shaqooyinka sida maamule mashruuc, barnaamijyada software, iyo coder Akhri wax dheeraad ah
Bhutanese Qaxootiga caqabado shaqocaqabadaha shaqada Refugee: Qaxootiga Bhutanese wajahaysaa caqabadaha shaqada. qaxootiga waxa uu sharaxayaa caqabadaha Bhutanese Qaxootiga wajihi
Dream weyn: riyo American | USAHelloriyo American: Waxaa si qarsoodi ah lahayn in ay jiraan qodobo badan oo ka dhigi 50 dalalka of America oo kala duwan ka soo kasta oo kale oo siyaabo badan.
Socoto waraysi shaqoHelidda shaqo ee USA ka qaadan kartaa waqti. qaxootiga A wadaaga iyada waayo-aragnimo ee socoto waraysi shaqo. Waxay ka hadlaysaa oo shaqo markii ugu horeysay ee USA.